Akụkọ Bible: Abigel na Devid - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ị̀ MA nwaanyị ọma a nke na-abịakwute Devid? Aha ya bụ Abigel. Ọ bụ nwaanyị nwere ezi uche, o gbochikwara Devid ime otu ihe ọjọọ. Ma tupu anyị amụọ ihe banyere nke a, ka anyị hụ ihe nọworo na-eme Devid kemgbe.
Mgbe Devid si n’ebe Sọl nọ gbapụ, ọ gara zoo n’ọgba nkume. Ụmụnne ya na ndị ezinụlọ ya gakwuuru ya n’ebe ahụ. Ọnụ ọgụgụ ndị niile gakwuuru ya dị ihe dị ka narị mmadụ anọ, Devid wee bụrụ onye ndú ha. Devid jekwuuru eze Moab, sị ya: ‘Biko ka ndị mụrụ m soro gị nọrọ, ruo mgbe m ga-amata ihe ga-abụ ọnọdụ m.’ E mesịa, Devid na ndị ikom ya malitere izogharị n’ugwu.
Ọ bụ mgbe nke a gasịrị ka Devid zutere Abigel. Nebal di ya bụ ọgaranya nwere nnukwu ala. O nwere puku atụrụ atọ, nweekwa otu puku ewu. Nebal nwere obi ọjọọ. Ma Abigel nwunye ya mara ezigbo mma. Ọ makwaara otú e si eme ihe ziri ezi. Ọ dị mgbe ọ zọpụtara ezinụlọ ya. Ka anyị hụ otú o si mee.
Devid na ndị ya emeworo Nebal ihe ọma. Ha enyewo aka ichebe atụrụ ya. Ya mere, otu ụbọchị, Devid zigara ụfọdụ n’ime ndị ya ịrịọta ihe n’aka Nebal. Ndị ikom Devid jekwuuru Nebal mgbe ya na ndị na-enyere ya aka na-akpacha ajị atụrụ. Ọ bụ ụbọchị oriri, Nebal nwekwara ọtụtụ ezi ihe iri. Ndị ikom Devid gwara ya, sị: ‘Anyị emeworo gị ihe ọma. Anyị ezurughị atụrụ gị ọ bụla, kama anyị enyewo aka ịzụ ha. Ugbu a, biko, nyetụ anyị ihe oriri.’
Nebal wee sị ha: ‘M gaghị enye ndị dị ka unu ihe oriri m.’ O kwuru nnọọ okwu n’ụzọ mkparị, kwuokwa ọtụtụ ihe ọjọọ banyere Devid. Mgbe ndị ikom ahụ lara kọọrọ Devid ihe merenụ, ezigbo iwe were ya. O wee sị ha: ‘Werenụ mma agha unu!’ Ha gawakwara igbu Nebal na ndị ya.
Otu n’ime ndị ikom Nebal nke nụrụ okwu ọjọọ ahụ o kwuru kọọrọ Abigel ihe merenụ. Ngwa ngwa, Abigel kwakọtara ihe oriri. O dokwasịrị ha n’elu ịnyịnya ibu ma jewe ịhụ Devid. Mgbe o zutere Devid, o siri n’elu ịnyịnya ibu ya rịdata, kpọọ isiala sị ya: ‘Biko nna anyị ukwu, etinyela uche n’ihe di m bụ́ Nebal kwuru. Ọ bụ onye iberibe nke na-eme ihe nzuzu. Lee onyinye m wetara. Biko, were ya ma gbaghara anyị n’ihi ihe merenụ.’
‘Ị bụ nwaanyị maara ihe,’ ka Devid kwuru. ‘I gbochiwo m igbu Nebal iji kwụghachi ya ụgwọ maka obi ọjọọ ya. Laa nke ọma.’ Mgbe Nebal nwụrụ n’ikpeazụ, Abigel ghọrọ otu n’ime ndị nwunye Devid.
Gịnị bụ aha nwaanyị a nke na-abịa izute Devid na foto a, ụdị mmadụ dịkwa aṅaa ka ọ bụ?
Ònye bụ Nebal?
N’ihi gịnị ka Devid ji ziga ụfọdụ n’ime ndị ikom ya ka ha gaa rịọ Nebal ka o nyetụ ha ihe oriri?
Gịnị ka Nebal gwara ndị ikom Devid, oleekwa ihe Devid mere?
Olee otú Abigel si gosi na ya bụ nwaanyị maara ihe?
Gụọ 1 Samuel 22:1-4.
Olee otú ezinụlọ Devid si gosipụta ezi ihe nlereanya banyere otú Ndị Kraịst kwesịrị isi na-enyerịtara ibe ha aka? (Ilu 17:17; 1 Tesa. 5:14)
Gụọ 1 Samuel 25:1-43.
N’ihi gịnị ka e ji kọwaa Nebal n’ụzọ nlelị dị otú ahụ? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)
Gịnị ka ndị nwunye bụ́ Ndị Kraịst taa pụrụ ịmụta site n’ihe nlereanya Abigel? (1 Sam. 25:32, 33; Ilu 31:26; Efe. 5:24)
Olee ihe ọjọọ abụọ ndị Abigel gbochiri Devid ime? (1 Sam. 25:31, 33; Rom 12:19; Efe. 4:26)
Olee otú ụzọ Devid si meghachi omume n’ihe Abigel kwuru si enyere ndị ikom aka ile ndị inyom anya dị ka Jehova si ele ha? (Ọrụ 21:8, 9; Rom 2:11; 1 Pita 3:7)
Abigel Kpara Àgwà Onye Nwere Ezi Uche
Olee ihe anyị nwere ike ịmụta n’ihe Abigel mere n’agbanyeghị na di ọ lụrụ bụ onye ọjọọ?